Nzira shanu dzekukunda Kutya sevatendi | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Kurarama nehumwari Nzira shanu dzekukunda Kutya sevatendi
Nhasi tichange tichibata nenzira shanu dzekukunda kutya sevatendi. Kutya ndiko kuvapo kwekufunganya kana kuziva kunogadzirwa nemanzwiro ekusava nechokwadi. Tose tine zvatinotya, hapana murume akazvarwa nemukadzi asina kutya. Tinotya zvinhu zvakawanda kwazvo. Vamwe vanhu vanotya kuti vachakundikana muhupenyu. Pazera diki kwazvo, vakasungwa nekutya kukundikana. Uku kutya dzimwe nguva kunova huni iyo mainjiniya vamwe kuita chimwe chinhu chakakura muhupenyu. Nekudaro, huwandu hwevanhu avo vanokurudzirwa zvakanaka nekutya kwavo hachisi chinhu kana ichienzaniswa neavo vakatungamirirwa mukuparadzwa nekutya kwavo.
Muporofita Jona akasunganidzwa nekutya mushure mekunge Mwari vamutuma kunoparidza. Akakundwa nekutya kwake kuti aifanira kusateerera kuraira kwaMwari. Akaenda neimwe nzira nekuti akanetseka kwazvo mumoyo make. Hupenyu hwakawanda uye magumo akaparadzwa paartari yekutya. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kutya hakufambe wega, kunouya nekufunganya uye kunetseka. Kuvapo kwekufunganya kunogadzira dambudziko risipo pakutanga. Rugwaro runoti mubhuku ra 2 Timothy 1: 7 Nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya asi wesimba, newerudo, uye newefungwa dzakanaka.
Tisati taenderera mberi, ngatikurumidze kuratidza zvimwe zvakashata zvekutya muhupenyu hwemutendi.
Mhedzisiro Yakashata yeKutya muMutendi
Muvengi Anova Giant Predator
Kutya kunoita kuti uve mhuka yemuvengi. Kune vanhu vazhinji kwazvo avo hupenyu hwakagumiswa nemuvengi nekuda kwemweya wekutya. Kana iwe wakasunganidzwa nemweya wekutya, iwe ungadai usingazive kana kuziva kuti Mwari ane zvakawanda zvakavimbiswa kwauri.
Izvi zvinoita kuti muvengi ave chikara. Chero nguva yaunoyedza kutsvaga nzira yekudzokera pamuchinjikwa, muvengi anokuyeuchidza nezve zvakapfuura uye unobva watya zvekuti unotoshaya kuti woita sei.
Wakamboona murume kana mukadzi anotya uye akadzikama here? Chero murume ane hupenyu hwakavhiringidzwa nekutya, murume akadaro anogara achimhanya achitsvaga mhinduro. Zvichakadaro, murume akadaro anova nyore uye anogona kutsauswa kana kutsauswa kuita chimwe chinhu chinotyisa kupfuura chavanotya.
Vanhu vazhinji vakanganwa musiki wavo, vakakanganwa kuti Kristu akadeura ropa pamuchinjikwa weKarivhari kuitira kuregererwa kwezvivi zvavo. Vanotanga kutsvaga mhinduro ipo isipo.
Inogona Kutungamira Kufa Kamwe kamwe
Kutya ndiko kuuraya kukuru kwevanhu. Izvo zvinotyisa zvekuti zvinogona kutungamira mukumanikidzwa kweropa izvo zvinobva zvazotora hupenyu hwemunhu akadaro. Zvisinei nezvauri kusangana nazvo, zvisinei nekuti mamiriro acho ezvinhu anotyisa zvakadii, gara uine kutenda kwakasimba.
Nzira shanu dzekukunda Kutya
Dzidza Izwi raMwari
Imwe yedzakanakisa nzira dzekukunda kutya sevatendi ndeyekuva neruzivo ruzivo. Dzidza izwi raMwari kuti uzive nezvese zvivimbiso zvaMwari zvehupenyu hwako. Aya mavimbiso achashongedza pfungwa dzako uye nekukuita iwe uzive kuti Mwari vanokwanisa kugadzirisa zvese mamiriro.
Rangarira rugwaro runoti Numeri 23:19 Mwari haasi munhu, kuti angareva nhema, uye haasi mwanakomana womunhu, kuti atendeuke. Iye akataura, akasazviita here? Iye akataura, akasazomupa zvakanaka here? Izvi zvinoreva kuti zvese zvipikirwa zvaMwari zvehupenyu hwako zvichazadzikiswa zvisinei nemamiriro ezvinhu auri kusangana nawo. Kana Mwari vakavimbisa kuti Vachakupa zvese zvaunoda maererano nehupfumi Hwake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu, iwe unofanirwa kuvimba naMwari kuti achazviita.
Ziva uye Vimba Mwari
Danieri 11:32 Vanoitira sungano zvakaipa, achavatsausa nokubata kumeso; asi vanhu vanoziva Mwari wavo, vachava nesimba, uye vachaita mabasa makuru.
Chinyorwa chinoti avo vanoziva Mwari wavo vachawedzera simba uye ivo vanozoshandisa. Hazvigoneke kuti munhu azive Mwari uye asingavimbe naye. Unofanira kuziva Mwari, uye unofanira kuziva kuti Iye anopa mubairo kune avo vanomutsvaga nekushingaira.
Kuvimba naMwari zvinoreva kuti urikukandira hanya dzako pana Mwari. Uri kurega kuenda kwako kunetseka, kutya uye kunetseka nekuti una Mwari. Kana dambudziko rehupenyu rauya richikutsvaira, iwe ucharamba uchivimba Mwari kuti Iye mukuru uye ane simba rakakwana kuti akununure. Chinyorwa chinotaura kuti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Mwari vasina kuraira. Ndiani ari kutyisidzira hupenyu hwako nerufu? Vimba naMwari. Akataura kuti haufe asi uchararama uchizivisa mabasa Ake munyika yevapenyu.
Namata muMweya Mutsvene
Imwe yedzakanakisa nzira dzekukunda kutya kwako ndeyekunamata mumweya mutsvene. 1 VaKorinde 14: 4 Uyo anotaura nendimi anozvisimbisa iye, asi anoprofita anovaka kereke. Kana iwe uchitaura nendimi, tinozvisimbisa isu pachedu. Isu tinozvivaka isu munzvimbo yemweya.
Kune vanhu vanotya kugara vega mumba nekuti vanotya kurwiswa nemuvengi. Iyi ndiyo nzira yekubuda mukutya ikoko. Mwari haana kutipa mweya wekutya asi weSonship yekuchema Ahba baba. Paunenge uchipinda mumba imomo, isa masimba ese emadhimoni pasi pehusungwa nekunamata mune mweya mutsvene. Inokuvaka iwe kukurira kutya.
Wana Rugare naMwari
VaRoma 8: 31 Zvino tichatiyi kuzvinhu izvi? Kana Mwari is kwatiri, ndiani anogona kuva kurwisana nesu?
Chimwe chezvikonzero nei muvengi achikurisa hupenyu hwedu nekutya ndechekuti hatisi murunyararo nemusiki wedu. Iyo nguva yatinogadzirisa naMwari, muvengi haachagone kuva nesimba pamusoro pedu. Hatichakwanise kutya zvinoitwa nemuvengi nekuti isu takamira zvakanaka pamberi paMwari.
Previous nyaya5 Nzira dzeKudzivisa Hufeve seSingles
inoteveraKunamata Pfungwa Kukunda Makaro
Angela Thomas Sheffield June 19, 2021 Pa 8: 53 am
ndokumbira ubate uye ubvumirane neni pakubudirira uye kununura mandiri uye nepfungwa dzemhuri yangu, miviri, mweya nemweya. tichaona kunaka kwaMwari mumugwagwa wevapenyu. namatira mwanakomana wangu, Christian 19, anoda chiremba. kumubatsira kutora vet yake. chitupa chekubatsira uye basa rakanaka nemari yake.
chinja nyaya yedu kune zvakanaka kuitira kuti munhu wese azive kuti aive Mwari kudivi redu, ratidza kuti une simba muhupenyu hwedu Mwari, nekuti tinokuda, tinokudza, tinokumirira uye uriwe Ndinovimba ndega, mauri tinovimba uye tinovimba … Maita henyu Ishe Muzita raJesu Ameni
Mary Zulu June 23, 2021 Pa 7: 54 am
Tinokutendai Mufundisi nekutikurudzira sevaKristu isu zvirokwazvo tine MWARI mukuru uye ane simba. Tinotenda MWARI nehupenyu hwako, ramba uchitipa kudya neshoko nguva dzose.
45 minamato yekukomberedza nemiseve dzerufu
40 Minamato Yekutenda yekubudirira mushure mekubvunzurudzwa kwebasa